२६ वर्षअघि नेपाल छोडेकी नेपाली डाक्टर बेलायत बाट देशनिकाला- यस्तो छ कारण ! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > २६ वर्षअघि नेपाल छोडेकी नेपाली डाक्टर बेलायत बाट देशनिकाला- यस्तो छ कारण !
admin September 30, 2018 प्रवास	0
लण्डन । बेलायतमा झन्डै १६ वर्ष बिताएकी एक नेपाली डाक्टर यतिबेला बेलायत सरकारबाट देशनिकाला हुने अवस्थामा पुगेकी छन् ।बेलायतको ईस्ट सर्रे अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर शशी अबाईले बेलायतको स्थायी बासोबासका लागि दिएको आवेदन अस्वीकृत भएपछि उनी डिपोर्टेसन हुने अवस्थामा आइपुगेकी हुन् ।
बिबिसी सर्रेको रेडियो सेवालाई अन्तरवार्ता दिदै शशीले बेलायतमा १६ वर्षसम्म कानुनी हैसियतमा बसेको हुंदाहुंदै पनि सरकारले जबरजस्ती देशनिकाला गर्न लागेको गुनासो गरेकी छन् ।सन् २००३ मा बेलायत आएकी शशीले नेपाल छोडेको २६ वर्ष भइसकेको छ । रशियामा अध्ययन गरेकी उनले बेलायत आएपछि जनरल मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर भएर डाक्टरको रुपमा काम गर्न थालेकी थिइन् ।
सन् २०१५ मा बेलायती नागरिक रहेका आफ्ना श्रीमानसंग सम्बन्धबिच्छेद गरेकी थिइन् शशीले । त्यसपछि सन् २०१६ को नोभेम्बरमा बेलायतको स्थायी बसोबासका लागि उनले गरेको आवेदन अस्वीकृत भएको थियो । होम अफिसबाट आवेदन अस्वीकृत भएपछि उनी कार्यरत सर्रे अस्पतालको जागिर समेत गुमाएकी शशी डेढ वर्षदेखि बेरोजगार पनि छन् ।उनको अपील अहिले जुडिसियल रिभ्युको प्रक्रियामा छ । अदालतले उनको पक्षमा फैसला नगरेको अवस्थामा उनीसंग नेपाल डिपोर्ट हुनुको विकल्प रहनेछैन ।
‘बेलायतमा सरकारका उच्च अधिकारीहरुले विशेष सीप, दक्षता हुने विदेशी कामदारलाई इमिग्रेसनको अफ्ठेरो नपार्ने भनेर भाषण गरिरहन्छन्, तर त्यसको ठीक विपरित मेरो जस्तो निकै उच्च डिमाण्ड रहेको सीपको कुनै वास्ता नगरेर मलाई जबरजस्ती देश फर्काउने कोशिस भइरहेको छ’, शशीले भनेकी छन् ।
सर्रे अस्पतालको नाक, कान, घांटी विभागकी जुनियर डाक्टर शशीलाई कामबाट निकालिएको डेढ वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि रिक्त ठाउं परिपूर्ति हुन नसकेको उनी बताउंछिन् ।
‘मैले नेपाल छोडेको २६ वर्ष भइसक्यो । बोल्न आएपनि मैले नेपाली भाषामा लेख्न समेत बिर्सिसकें । यस्तो अवस्थामा मलाई अब त्यहि ठाउंमा गएर पुनः जीवन सुरु गर्न निकै अफ्ठेरो पर्ने निश्चित छ’, शशीले भनिन्, ‘मलाई बेलायत मन परेको छ, यहांको एनएचएसको सिस्टम मन परेको छ । मैले यतै घर किनेर स्थायी बन्दोबस्त गरिसकेकी छु । मेरो सीप र अनुभवबाट म यहि बसेर सेवा गर्न चाहन्छु ।’
दोहा हिडेका कतारी नागरिककाे झोला खोलेर हेर्दा विमानस्थलका प्रहरी नै चकित…